“Ambonin’izany rehetra izany ny misahana ny olana ao anatin’ny mahaolona” · Global Voices teny Malagasy
“Ambonin'izany rehetra izany ny misahana ny olana ao anatin'ny mahaolona”
Voadika ny 04 Jona 2018 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Português, русский, English
Natalia Montoya dia mpikambana ao amin'ny Colectivo G, izay “manangana, mitantana, ary mampiditra tetikasa ara-tsosialy; indirndra fa eo amin'ny kianjan'ny miralenta (lahy/vavy) amin'ny fomba fiditra zon'olombelona” ary miorina ao Cochabamba, Bolivia. Izao manaraka izao dia avy amin'ny famakafakan'i Natalia amin'ny voambolana “feminicidio” (fandripaham-behivavy).
Teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra miisa 1540 nivoaka tanelanelan'ny volana mey 2017 sy mey 2018 manonona ny “feminicidio” ao amin'ny angona Media Cloud miisa roa ao amin'ny seha-pampitam-baovao miteny espaniola ao Bolivia. (Jereo lehibe kokoa)
Ny zavamisy amin'izao fotoana izao asehon'ny zavonteny manondro ny fandriapaham-behivavy no mitaratra ny tsy fisian'ny fanairana momba ny lohahevitra, tsy fahitana ny Fanjakana rehefa mamorona politikam-panjakana izay miantoka tokoa ny zo tsy hanaovana heristra ny vehivavy, sy ny tsy fahombiazan'ny rafitra ara-pitsarana.
Inona no tianay ho hita?
Inona no tokony eritreretin'ny fampitam-baovao amin'ity raharaha ity?
Fa manao ny tsiapipaika rehetra eo ampelantanantsika isika hahatanteraka ny fitsarana. Fa tokony handray andraikitra ny Fanjakana ary hanangana politikam-panjakana hiaro ny zon'ny vehivavy sy ny zazavavy, sy hanagana politika ara-panabeazana hametraka andraikitra amin'ny fanesorana ny rafitra rehetra tarihin-dray sy manavakavaka ny vehivavy. Farany, amin'ny maha-mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena, dia zakainay ny adidy hiady amin'ny herisetra, mba ho mora fo isika amin'ny lasibatra (mivantana na ankolaka) ary ambonin'izany rehetra izany dia hikarakara ny olana ao anatin'ny mahaolombelona.
Izy ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames norafetina ho ao anatin'ny hetsika nokarakarain'i Raisa Valda Ampuero avy ao amin'ny Warmi.Red sy i Fabiola Chambi. Nanampy ry zareo tamin'ny fikarakarana atrikasa notontosaina tamin'ny 30 May 2018 tao Cochabamba, Bolivia ary namoriana solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihana ny fomba hanehoana azy ireo na ny lohahevitra raharahian-dry zareo ao amin'ny angona media ao Bolivia sy ny fananganana tantara ho setrin'izany.
19 ora izayAfrika Mainty